XCMG Wheel Loaders ukusebenza esifundeni okokuqandisa-ezibandayo russia - China Xuzhou Fenghe Intelligent
XCMG Wheel Loaders ukusebenza esifundeni okokuqandisa-ezibandayo russia
esifundeni Arctic, Russia - Agasti 16, 2017 - Esikhathini ngobukhulu ovulekile okwami ​​zaseRussia, Loaders ne tonnage elikhulu e China - XCMG LW1200K futhi ezimbili ezinamasondo ogandaganda XCMG DL900A bebe- amahora kuka 20,000 ngaphandle ukuphuka okokuqandisa imvelo -cold. Ukusebenza XCMG Loaders futhi ogandaganda ezinamasondo lifanelwe ithemba nokubonwa evela kumakhasimende Russian sithembele izimo zawo ezifana isakhiwo esiqine, ashukumisayo ukushayela force, ukuzinza futhi waba nokwethenjelwa, ikhono energy esisindisa, ukusebenza eliphezulu futhi ukuvumelana nezimo okuphelele kanjalo ukuze kubanda kakhulu.
Kubanda kakhulu siyingozi edangalisayo izinselele nokuqhutshwa ukwakhiwa imishini. Ngaphezu kwalokho, izinkampani zezimayini abathemba ukuthola izindlela ukwandisa ezithela imishini futhi ngesikhathi esifanayo, ukwehlisa izindleko zabo. Ikhwalithi ehola ubuchwepheshe kanye okuphakade of XCMG imikhiqizo kahle izidingo izinkampani zezimayini.
"XCMG uye yinto eza kuqala ekuphileni kwethu nezinqumo sabona ukuthi inkampani kungenzeka ngokwezifiso imikhiqizo ihlanganiswe olususelwa izimo zokusebenza langempela nezinye izicelo ezithile" kusho imeneja ka-ukuba le nkampani yezimayini. Weza yonke indlela eya China lokufeza ku-indawo uphenyo ngesikhathi XCMG ezihlakaniphile yokukhiqiza isizinda. Ngemva observation kuphinde kuphenywe, wagcina wakhetha XCMG ngaphandle kokungabaza.
Amaqiniso ukufakazela ukuthi XCMG Loaders mnike akazange phansi. Ikhwalithi okuphakade, ukusebenza kakhulu, ukusebenza kahle, izingxenye kanye nekutfolakala inkonzo nokwaneliseka XCMG imikhiqizo ngalé ithemba labo. "Lapho ushayela XCMG Loader, umuzwa kakhulu enembile iyona cab isikhala esikhulu, umbono ububanzi, yobunzima ezinhle futhi umsindo ongaphakeme", yafunwa yi opharetha XCMG LW1200K Loader. "Okwamanje, le moto ubelokhu esebenza amahora angu-20,000. I ebhakedeni 6.5m³ ezisindayo-duty ifakwe ku LW1200K kwasiza ukwenza bula kulula kakhulu ukusebenza kahle ephakeme. Ngaphezu kwalokho, ezisindayo-duty ebhakedeni amazinyo bezihlahla ohlangothini sithuthukiswe ukumelana ibhakede sika olwalwenza kanye. Ikakhulukazi eside wheelbase futhi esindayo-umthwalo design, sokukhomba isimo abasebenza North Pole ngu XCMG dambisa kithi phezu kakhulu ebhekene isiphi isimo elibuhlungu ". Yena wenaba imininingwane Loader lokuqala ezivela China phezu kwami ​​injabulo kakhulu.
Njengoba lomthengi imishini kanye langempela imishini opharetha emayini, it possessed isipiliyoni uchichima nokuphatha imishini ukwakhiwa imishini. Ngokombono wabo, ukwaneliseka iningi XCMG Loaders amanga eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa ezimbalwa, amasevisi ngesikhathi esifanele nophethiloli kahle. "Sifike ngesikhathi emva-sales amasevisi abonisa ukuthi imishini yethu ngeke ziyeke ukusebenza ngenxa ukungasebenzi. Futhi izindleko ephansi uphethiloli kusilethela utshalomali ezincane nemali ephakeme ", wathi abantu efanele ophethe.
Amahora angaphezu 20000 zidlulile, le Loaders ezintathu XCMG samelana imvelo ezinzima ovulekile ngobukhulu yaseRussia e-Arctic. ukuboniswa yabo eqhubekayo uhlamvu okusezingeni eliphezulu, izinga, ukusebenza, ukuzinza, fuel Umnotho, maintainability nokunye baye banconywa yibo bonke abasebenzi kule ndawo yezimayini.
Thumela isikhathi: Aug-28-2017